PITA iko Manufacturers - China PITA iko Factory & Suppliers
COPAK'S PET Cups bụ 100% nrube isi na nri Nri. All mmepụta Filiks na-Emechara na ájá-free ọcha omumuihe. Na copak agafeela FDA / BRC / QS / SGS / LFGB / ISO9001 Asambodo.
COPAK-PET Cup bụ nke mara mma, ogologo oge, nchekwa maka ojiji, ahụike na ọkwa nri. 100% BPA anaghị akwụ ụgwọ. Anyị PET cup na-adọrọ mmasị ma ndị na-eto eto ma ndị agadi n'ihi ejiji ha.
PITA Cup 12oz
1.Color: Crystal-doo anya ma ọ bụ yi biri ebi
2. Ihe: Polyethylene Terephthalate (PET)
3. Mkpuchi: mkpuchi dị larịị ma ọ bụ mkpuchi dome
4. Jiri: Ihe ọ drinksụ drinksụ na-a Coldụ, ihe ọverageụ ,ụ, kọfị akpụrụ mmiri, ndị na-eji ire ụtọ, afụ / tii Boba, milkshakes, mmanya a kpụkọrọ akpụkọ, mmiri, sodas na mmiri.
5. Ngwugwu: 25pcs / aka uwe, 20sleeves / CTN
6. MOQ: 30,000pcs (The more ibu, ala price)
7. Port: Ningbo ma ọ bụ Shanghai, China
8. ikike: 12Oz na 375ml, 340ml ma obu 350ml
PITA Plastic Cup na mkpuchi
Shanghai COPAK industry Co., LTD bụ ọkachamara ụlọ ọrụ maka PET karama na PET cup na china. Maka PET CUPS, anyị nwere PET PITA plastic na mkpuchi ma ọ bụ na-enweghị mkpuchi.
Maka iko PET, anyị nwere 5oz, 7oz, 8oz, 9oz, 10oz, 12oz, 13oz, 14oz, 15oz, 16oz, 20oz, 24oz na otu. The n'elu dayameta ịdị iche iche site na 74mm ka 98mm. Naanị gwa anyị oke na ikike ịchọrọ, anyị ga-akwado iko PET kwesịrị ekwesị maka gị.
Banyere mkpuchi, ihe mkpuchi kachasị ewu ewu bụ mkpuchi DOME na LID. Anyị nwekwara ọkara oghere mepere emepe, mkpuchi ahịhịa na-enweghị obere, mmanụ mkpuchi mmanụ a honeyụ na ihe ndị ọzọ. Naanị gosi anyị otu ịchọrọ. Enwere ike ikwuputa ọnụ na iko plastik PET.
A na-akpọgharị rim anyị PITA PUKWU PỌP. Ya mere, ọnụ na-eji ire ụtọ. Ọ dị ezigbo mma ị drinkingụ mmanya. Emere mkpuchi niile dịka PET CUP TOP dayameta na ọnụ ha. Ha dakọtara ibe ha nke ọma na nke a anaghị eme ka iko PET PET anyị dị.
12oz plastic iko
Ihe ： PLA na PET ihe
Olu: 12oz plastic iko 340ml / 350ml ma ọ bụ 375ml
Logo: COPAK ma ọ bụ omenala e mere na-anabata
Ekike: OEM / ODM
Oge ịkwụ ụgwọ: T / T; L / C; ọdịda anyanwụ
16oz plastic iko
Copak kacha ewu ewu na 16oz plastic cup bụ nke PET material.the olu na size nkọwa bụ dị ka na-esonụ.
32oz PET iko
Size: 11.5 * 6.5 * 17.6 / 11.5 * 6.3 * 17.8cm
Olu: 32oz, 1000ml
Agba: doro anya ma ọ bụ ahaziri agba
Logo: Ahaziri logo anabata
Oge Mbuga ozi: dabere na ihe ị chọrọ na oke.
Asambodo: ISO9001, BRC, FDA, LFGB, QS
Nkọwa nke anyị 30oz PET iko dị ka n'okpuru,
Na Copak, 92mm PET iko edebanyere na mpịakọta dị iche iche. 5oz nwere 200ml, 7oz nwere 200ml, 8oz na 280ml, 9oz nwere 275ml, 12oz na 375ml na 12oz na 340ml, 14oz na 460ml, 16oz na 580ml bụcha ndị ahaziri ka 98mm dị n'obosara. Gụnyere ma ọnweghị oke na mpịakọta ndị a na dayameta, ị nwere ike ịchọta nha ọ bụla na mpịakọta na COPAK.
95mm PET iko
95mm PET cup dị na olu nke 8.5oz, 10oz, 12oz, 13oz, 16oz, na 24oz. COPAK95mm PET iko Ezubere iji dabaa ihe mkpuchi 92mm ọ bụla ma ọ bụrụ na ị na-achọ iko plastik na mkpuchi mgbe ahụ copak nwekwara ọtụtụ nhọrọ dabere na mkpa gị. Họrọ site na ahịrị dị larịị, dome, ma ọ bụ ahịhịa ọka! Mgbanwe nke mkpuchi nhọrọ na95mm PITA iko enyere aka idobe ngwa ahịa nke na - eme ya nnukwu mgbakwunye na ngwa ahịa ụlọ nri gị.
Anyị pụrụ iche, omenala iko imewe "COPAK" bụ zuru okè n'ihi na ọ bụla chilled afụ tii, mkpụrụ ọ beụ ,ụ, mmiri ara ehi, milkshakes, kọfị na smoothie. The “Ezi Oge” ebipụta bụ 360-gburugburu na brightens gị ụbọchị na omume ọma accented floral on a 95mm PITA iko. Zuru okè maka ọdịda, ma ọ bụ oge ọ bụla n'afọ! Otu n'ime ihe kachasị ewu ewu iko anyị.
COPAK 98mm PET iko Ezubere ya iji dabaa ihe mkpuchi 98mm ọ bụla ma ọ bụrụ na ị na-achọ iko plastik na mkpuchi mgbe ahụ copak nwekwara ọtụtụ nhọrọ dabere na mkpa gị. Họrọ site na ahịrị dị larịị, dome, ma ọ bụ ahịhịa ọka! Mgbanwe nke mkpuchi nhọrọ na98mm PITA iko enyere aka idobe ngwa ahịa nke na - eme ya nnukwu mgbakwunye na ngwa ahịa ụlọ nri gị.
Na Copak, 98mm PET iko edebanyere na mpịakọta dị iche iche. 12oz na 360ml, 14oz na 400ml, 16oz na 500ml, 20oz na 610ml, 24oz na 690ml na 700ml bụ ndị emebere ka 98mm dị n'obosara. Gụnyere ma ọnweghị oke na mpịakọta ndị a na dayameta, ị nwere ike ịchọta nha ọ bụla na mpịakọta na COPAK.
BPA iko kọlụm na-akwụghị ụgwọ
Bisphenol A (BPA) bu ihe eji eme ihe na ihe ndi ozo (CH3) 2C (C6H4OH) 2 nke ndi diphenylmethane ndi ozo na bisphenols, ya na ndi hydroxyphenyl abuo. Ọ bụ ihe siri ike na-enweghị ntụpọ nke na-agbaze na ihe ndị na-edozi ahụ, mana anaghị edozi mmiri (0.344 wt% na 83 Celsius C).
China PET iko
Shanghai Copak ụlọ ọrụ Co., LTD enye adaba ahụ ike na elu mma ọnụ nkwakọ ngwaahịa ngwọta na ọrụ maka isi nri ụlọ ọrụ, ika kọfị shop, mmiri ara ehi tii shop, eji megharịa ọnụ ụlọ, kpakpando hotel, azụmahịa ụlọ ọrụ, kasị elu ezinụlọ.
Isi ngwaahịa COPAK bụ karama China PET,China PET iko, PET containers, PET tray. A na-eji ngwaahịa anyị maka nri, ihe ọverageụverageụ, mkpụrụ osisi, ngwaike, ihe egwuregwu, ọrụ aka, ihe ịchọ mma, onyinye, ọgwụ, ngwaahịa dị mma, mkpa kwa ụbọchị na akwụkwọ ị na-ede akwụkwọ.Y nwere ike ịchọta ihe ọ bụla ịchọrọ na ụlọ ọrụ anyị.
China PET Cup emeputa
Shanghai COPAK, nke amara dika china PET cup emeputa, e hiwere ya na 2010. A maara iko CETAK si PET maka ike ya na ịkwagide uto ngwaahịa, udidi na ọdịdị ya. Ọ bụ nhọrọ magburu onwe ya ebe edocha iko ahụ na-eme ka ọdịdị ya dịkwuo mma.
A na-eji iko PET anyị eme ihe maka smoothies, ihe ọicesụedụ, kọfị nwere akpụrụ mmiri, ịkwa ahụ ike, desserts, nut na mkpụrụ osisi mix, confectionery, flavored ice ice, soft drinks na aholicụrụma.